Pin Barrel Cold Feed Rubber Extruder Machine - China Qingdao rakadzikama Machinery
PIN-bharero Cold kufudza rabha EXTRUDER 1 Different misoro extrusion anechekuita extrude siyana hafu-rapera rabha products.Available mu Straight musoro, havatsiki musoro, Cross musoro, Strip Extrusion musoro uye Strainer musoro. 2 Upfu rinoumbwa zvikamu zvinoverengeka. In zvokudya zong, kuti zononoka cheap car insurance kushanda pamwe kurutivi mabhanzi kunatsiridza kudyisa kugona. Munguva plastication uye extrusion munyika dzine, akasiyana nhamba nembambo vari fitted.The Upfu ndiko hunyambiri simbi marongerwo uye vakatushura circumferenti ...
Port: Qingdao, CNF, CIF akagamuchira
PIN-bharero Cold Feed rabha EXTRUDER
1 Different misoro extrusion anechekuita extrude siyana hafu-rapera rabha products.Available mu Straight musoro, havatsiki musoro, Cross musoro, Strip Extrusion musoro uye Strainer musoro.
2 Upfu rinoumbwa zvikamu zvinoverengeka. In zvokudya zong, kuti zononoka cheap car insurance kushanda pamwe kurutivi mabhanzi kunatsiridza kudyisa kugona. Munguva plastication uye extrusion munyika dzine, akasiyana nhamba nembambo vari fitted.The Upfu ndiko hunyambiri simbi marongerwo uye vakatushura circumferentially.
3 The sikuruwa zvinhu adopts 38CrMOALA chiwanikwa simbi, pashure richipedza uye tempering ichiumba, Qualitative, zvakarurama nokugeda, pamusoro nitriding pfapfaidzo bimetal, makorari, nezvimwewo, pamwe chiri kumusoro nemazvo, mukuru ngura chokudzivirira, mukuru kusakara nemishonga. The upenyu sikuruwa basa iri kaviri refu.
Mashoko acho: 38CrMOALA
Hasha Degree : HB240 ° ~ 280 °
Nitriding pokuoma : HV850 ° ~ 1000 °
Nitriding udziku : 0.45 ~ 0.7mm
Pamusoro Roughness : Ra0.4
Hard Chrome ra pashure Nitriding : ≥900HV
Chrome ukobvu : 0,05 ~ 0.10mm
Two-danho Alloys : HRC56 ° ~ 65 ° ( nickel-garo chiwanikwa )
Chiwanikwa udziku : 1.5 ~ 2.0mm
4 rachulis iri yokuderedza wakaumbwa chiwanikwa simbi, mazino chakaoma.
Gearbox pamwe mhango goho nomubato nokuda sikuruwa kutonhora kunyange Michina Joint.
5 Heating uye kutonhora ezvinhu: uchafira hita (chakuvhuvhu tembiricha controler).
6 Constant Speed kana shanduka nokukurumidza nemotokari sezvo paavhareji chaicho chinodiwa.
Motor: Frequency nokukurumidza kudzora injini kana DC motokari.
7 Zvakanakira muchina zvinosanganisira nani plastication mugumisiro, yepamusoro extrusion kugona, nechezasi tembiricha iri ichibviswa rabha uye anotsvedzerera kushanda, nyore kushanda nokuchengetedza.
8 Zviri zvinowanzoshandiswa extruding rabha hosipaipi, rabha sepombi, rabha jira, womukati liner, zvisimbiso, waya waya, mumuhara, tai musvine, tai divi rusvingo, kushandiswa kupa rabha kuti diki kukura Calendar.
Technical Parameters musoro mienzaniso:
Screw dia of mm 90 120 150 200 250
Max.Screw havukavu R / Maminitsi 60 55 45 33 26
Row Qty kuti Pin 8 10 10 12 12
Pin Qty neimwe mutsara 6 6 8 10 12
Magetsi 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ
Zone mvura inopisa kutenderera 4 4 4 4 4
chinzvimbo Makirogiramu / h 250-360 600-900 1000-1500 1600-2600 ~ 3000
uchitikurudzira encombrements L mm 2570 3010 4000 7250 7980
About uremu t ~ 4.5 ~ 6 ~ 7.25 ~ 12 ~ 17
Kana uine rako chinodiwa chinokosha, tapota inzwa wakasununguka nesu. Nesuwo gadzirisa muchina sezvo paminiti wako zvidikanwi.
Previous: C Type Rubber okurapa Press Machine
chando rabha extruder
tyre rabha extruder
Rabha Filter Strainer Extruder Machine
BMC Unsaturated Glass Fiber Resin jekiseni Mol ...
PVC Steel Wire yanyatsosimba Hose Extruding Line